Indawo egqibeleleyo yokuphuma
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguJurij
UJurij unezimvo eziyi-43 zezinye iindawo.
Igumbi lokulala eliphangaleleyo kwindlu endala ehlaziywe ngokupheleleyo enegumbi lokuhlambela elitofotofo kunye negadi entle eluhlaza. Ilungele ukubaleka impelaveki okanye indawo yokusekela uhambo lwakho lweKarst.
Amagumbi aphangaleleyo anokhetho olukhulu lweencwadi. Uya kuba ne-balcony yakho yabucala kunye negadi enkulu ukuba uyonwabele. Kukho ikhitshi elincinci leti kunye nefriji encinci. Naziphi na ezinye iimfuno zokupheka zinokubonelelwa ngokwemfuno okanye nceda ujonge ukubakho kolunye uluhlu lweeflethi zethu kunye nekhitshi.
Njengomntu ogqwethekileyo siyafumaneka 24/7 ngamava okwenyani kunye awodwa eKrast. Sinikezela ngeengcebiso zokupheka kunye neziqhelekileyo kuyo nayiphi na iwayini yasekhaya kunye nezimuncumuncu, ubugcisa kwimbali okanye "i-spelunking".